KMF/Cnoe: “Mbola azo ahitsy ny lalàm-pifidianana” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Mbola azo ahitsy ny lalàm-pifidianana”
Mba aiza ny fanitsiana ny lalàm-pifidianana? Tsy fantapantatra be ihany izay nataon’ny parlemantera farany teo… Mbola azo atao ny fanitsiana, raha ny fijerin’ny KMF/Cnoe.
“Mbola misy ny azo ahitsy amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana, na efa nisy aza ny fanitsiana nataon’ny parlemantera tamin’ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo. Anisan’izany, ohatra, ny hanaovana ny fifidianana ho andro alatsinainy, fa manahirana… Samy manana ny heviny ny amin’izay. Andraikitry ny filohan’ny Repoblika ny manao an’izay… “
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, momba ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny fifidianana amin’izao fotoana izao. Maromaro ny tolo-kevitry ny Ceni tsara raisina: tokony hofoanana, ohatra, ny karatry ny mpifidy. Efa ela no niresahana an’izay, fa tsy fantatra hoe rahoviana vao hotanterahina.
Tsara amin’ny lafiny iray koa ny fanokafana mandavantaona ny fisoratana anarana amin’ny lisi-pifidianana, fa tsy ferana. Mila fitandremana tsara ny hoe: misokatra koa ny fahazoana manao hosoka ao anatin’izay, fa hampidirina amin’izany koa izay tsy tokony ho tafiditra ao anatin’ny lisi-pifidianana aza.
Tsara andrasana ny solombavambahoaka vaovao
Ho an’ny KMF/Cnoe, tsaratsara kokoa hatrany raha ny solombavambahoaka no mandany ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana. Raha tsy misy ny solombavambahoaka amin’izao fotoana izao, tsara raha miandry ny solombavambahoaka vaovao hahazoana manitsy izay lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana izay. Mila adihevitra izay fanitsiana ny lalàm-pifidianana izay, ary ny mpisehatra rehetra amin’ny fifidianana no tokony handray anjara amin’izany.
Mahavariana ny fanitsiana ny lalàm-pifidianana natao tamin’ny fivoriana tsy ara-potoan’ny parlemantera teo: inona no afenimpenin’ny solombavambahoaka? Misy zavatra afenina ao, fa tsy mazava… Ho anay, mba lafitsara tamin’ny fitondrana teo aloha: aparitaka ho fantatry ny olona rehetra aloha ny volavolan-dalàna alohan’ny hampidirana azy amin’ny Antenimierampirenena. Nahazoana ny tsikeran’ny olona izay. Ny mety ho lesoka, angamba: satria fantatry ny olona mialoha ilay volavolan-dalàna, lasa tsikerain’ny olona… Na izany na tsy izany, tokony ho fantatra… Aiza ny mangarahara? Tsy ampy izay fangaraharana izay.